Global Voices teny Malagasy » MENA: Brrrrrrrrrrrrrr…Mangatsiaka · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 17 Novambra 2018 8:48 GMT 1	 · Mpanoratra Amira Al Hussaini Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Iràka, Katara, Koety, Libia, Mediam-bahoaka, Tontolo_iainana, Voina
Tao Qatar no nijanonanay voalohany, izay namaritan'i  Marjorie in Qatar ny hatsiaka ao amin'ny firenena izay tsy mahazatra ny fampiasana fitaovana manome hafanana. Manoratra izy:
Niaina orana taorian'ny sivy volana “main-tany” ihany koa i Dan .
Tsindrio eto  raha hijery ny sarin'i Dan sasany.
Manoratra ao amin'ny Qatar Living, Ajnas  manipika ny maha-mampidi-doza ireo latsak'orana sy ny voka-dratsiny eo amin'ireo mpamily sy ny mpampiasa lalana. Hoy izy:
Mohamed nanoratra hoe :
Ankoatra ny manao izay maha-kamo azy, ZDistrict nilaza  fa henjana ny hatsiaka ao amin'ny maoteran'ny fiarany. Manazava izy:
Mbola ao Koety ihany, Fonzy mizara  amintsika sary izay azony tamin'ny alàlan'ny mailaka, sarina rano mandry eny amin'ny moron-dranomasina any Wafra.
Nampihena ny fihetseham-pon'i Khadija Teri nandritra ny faran'ny herinandro ny toetr'andro ratsy. Manoratra  izy hoe:
Sambany  teo amin'ny fahatsiarovana velona, nisy ranomandry  tao Baghdad. Marshmallow26 manoratra  bebe kokoa momba ny sakaosy izay nanafàna ny fon'ny mponina ao Baghdad. Manazava izy:
Marshmallow26 nahavita nandresy lahatra ny rainy mba hitondra fiara adiny roa ho any Sullymania  ary hizara amintsika sarina oram-panala maromaro tany .
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/11/17/130429/
 nanoratra hoe: http://www.qatarliving.com/node/64350
 nisy ranomandry: https://www.globalvoicesonline.org/2008/01/14/iraq-videos-of-snow-in-baghdad/
 mizara : http://abuaardvark.typepad.com/abuaardvark/2008/01/snow-varks.html